Greater Surbiton no manoratra momba ny fifandraisan'ny OTAN sy Rosia: “Raha tsy sahy mifanandrina amin'i Rosia akory ny vondrokerin'ny OTAN, dia mampanontany tena ihany hoe inona moa izany no tena ilàna ny OTAN?” Ary miresaka amin'ny fifandraisan'i Gresy amin'i Makedonia ao amin'ny OTAN ihany koa izy: “Mpikambana bitika tao amin'ny...
Timor atsinanana: Inona no lazain'ny mpiresaka momba an'i Tibet?
Tselatra · Shina10 Avrily 2008
Tamin'ny fivoahan'ny lahatsarin'ny Guardian momba ny toe-draharaha tany Tibet no namoahan'i Daniel Arruda [pt] ny heviny: “Mazava be ny fitsarana:'Tsy tian'i Shina ho fantatra ny zavamisy marina any Tibet’ na ‘manomboka miasa ny fampielazan-kevitry ny Shinoa praopagandy’.” Lahatsary mampiseho hoe hatraiza ny hamaroan'ny mpamoaka hevitra aty amintsika no miezaka handà...
Shina: Eritreritry ny Moanina Tibetana iray
Tselatra · Shina09 Avrily 2008
Nitatitra indray mandeha ny lahatsoratra nosoratana Moanina Tibetana iray mikasika ny raharaha tamin'ny 14 marsa lasa teo i Woser. Nokianiny avokoa na ny fihetsiketsehana miharo herisetra na ny fanamelohana nataon'ny governemanta Shinoa ny Dalai Lama [zh] ka nahavery ny marina (mody tsy ilazana hoe nanolana ny marina).